तुलसीपुर पश्चिम दाङको मात्रै नभएर सिंगो राप्तीको व्यापारीक केन्द्र हो | गणतन्त्र राष्ट्रिय दैनिक
तुलसीपुर पश्चिम दाङको मात्रै नभएर सिंगो राप्तीको व्यापारीक केन्द्र हो
| 1528 Views | Published Date : 15th September 2016 |
जनकप्रसाद खराल (अध्यक्ष)
प्रजातान्त्रिक उद्योग व्यवसायी संघ
तुलसीपुरको व्यापारिक क्षेत्रमा चिरपरीचित नाम हो–जनक खराल । बिगत २० वर्षदेखि खाद्यान्न व्यवसायमा लाग्नुभएका खरालले हाल मल्टिनेशनल कम्पनीको एजेन्सीका रुपमा पनि आफ्नो व्यापार अघि बढाउनुभएको छ । बैचारिक रुपमा नेपाली कांग्रेसमा आस्था राख्ने व्यवसायी खराल प्रजातान्त्रिक उद्योग व्यवसायी संघ र मानव परोपकार तथा समाज कल्याण केन्द्र दाङका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ । यसपटकको अर्थ सम्वादमा हामीले खरालसँग तलुसीपुर क्षेत्रको व्यापार, व्यसाय, वजार व्यवस्थापन र त्यहाँको समसामयीक घटनाक्रमका बारेमा गणेश आचार्यले गरेको
कुराकानी प्रस्तुत गरेका छौं । (सम्पादक)
व्यापार, व्यवसायका दृष्टिकोणले तुलसीपुरको अवस्था कस्तो छ ?
—व्यवसायका हिसावले तुलसीपुरको अवस्था एकदमै राम्रो छ । तुलसीपुर पश्चिम दाङ मात्रै नभएर सल्यान, रुकुम र करिव आधा रोल्पाको व्यापारिक केन्द्र हो । मान्छेका ईच्छा आकांक्षा जसरी दिन प्रतिदिन बढ्दै छन्, त्यसरी नै यस क्षेत्रको व्यापार बढ्दै गएको छ ।
तपाई कुन–कुन व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ ?
—पुरानो व्यवसाय भनेको खाद्यान्न हो । त्यो अहिले पनि छ । बिगत ८ महिनादेखि मल्टिनेश्नल एजेन्सीका रुपमा पनि काम गरिरहेको छु ।
तपाई त खाद्यान व्यापारी, व्यापारीले खाद्यान्नमा मिसावट गर्छन् भन्ने पनि सुनिन्छ । के यो साँचो हो ?
—तपाईले भने जस्तै मैले पनि खाद्यान्नमा मिसावट गरिन्छ भन्ने सुनेको छु । तर, मैले अहिलेसम्म गरेको छैन र गर्ने पनि गर्दैन । किनकी मिसावट गर्नु भनेको उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्नु हो । म त्यस्तो गर्ने पक्षमा छैन । मिसावट त्यस्ताले गर्छन्, जो बढी महत्वाकांक्षी हुन्छन् । म जस्तो छु, त्यसमै खुसी छु ।
तपाई व्यापारीको नेता पनि हुनुहुन्छ । तुलसीपुरको मुख्य व्यापारीक केन्द्रबाट व्यापारी बिस्थापित भइरहेका छन् । यो घटनालाई कसरी लिनुभएको छ ?
—तुलसीपुरको मुख्य व्यापारिक केन्द्र “क” लाइन हो । त्यहाँ बैंकहरु आएपछि हाम्रा व्यापारी साथीहरु बिस्थापित हुनपरेको छ । यस विषयमा हामीले घरधनी, बैंकका अधिकारी र व्यापारीसँग कुरा गरेका छौं । यो वास्तवमै गम्भीर समस्या हो । बीच बजार बैंक बस्न थाले भने बजार भद्रगोल हुन्छ । बैंकलाई बजारको छेउतिर राखेर मुख्य बजारमा अन्य व्यापार गरिनुपर्छ ।
तुलसीपुर बजार खासै व्यवस्थित छैन भनिन्छ, यहाँको मुख्य समस्या भनेको पार्किङ व्यवस्थापन हो, जो व्यापारसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ । यसलाई कसरी व्यस्थापन गर्न सकिएला ?
—पार्किङको व्यवस्थापन केही मान्छेले भने जस्तो त्यति सजिलो छैन् । यसबिषयमा नगरपालिकाले पटक(पटक सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिसकेको छ । पार्किङ बजार भन्दा बजारमा बनेका घरसँग जोडिने कुरा हो । तुलसीपुर बजारमा जति पनि घर छन्, ती अधिकांश पहिले नै बनेका छन् । जतिबेला बजारमा भिडभाड कम हुन्थ्यो । मोटरसाइकल र गाडी कम थिए । पार्कीङको खासै समस्या थिएन । अहिले जनघनत्व ह्वात्तै बढेको छ । मोटरसाइकल र गाडीको संख्या बढेको बढेई छ । अनि पार्किङमा समस्या छ । बीच बजारमा पार्किङ क्षेत्र बनाउन सम्भव छैन । यसको एकमात्र विकल्प भनेको बजारको साइडमा पार्किङ क्षेत्र तोक्नु पर्छ । फेरि पार्किङ क्षेत्र तोकेर मात्रै पनि हुँदैन । जनचेतना जगाउन जरुरी छ । ताकि, बजारको छेउमा आफ्नो सवारी साधन पार्किङ गरी मानिस किनमेल गर्न जान तयार होऊन् । यदि चाँडै यसो गर्न सकिएन भने, तुलसीपुर बजार पार्किङको समस्याका कारण अस्तव्यस्त हुन्छ ।
तुलसीपुरको समग्र राजनीतिलाई कसरी मूल्याकङ्न गर्नुभएको छ ?
—आजभोलि तुलसीपुरको राजनीति मनी र मसलको कब्जामा छ । जसले गर्दा जुन गतिमा तुलसीपुरको विकास हुनुपर्ने हो, त्यो गतीमा विकास हुन सकेको छैन । एउटा मात्रै होइन, प्रायः पार्टीमा जोसँग पैसा र गुन्डा छन्, तिनैको बोलबाला छ । जो साँच्चिकै ईमान्दार भएर राजानीतिमा लागेका छन्, उनीहरु छाँयामा परेका छन् । अब यहाँको राजनीतिलाई मनि र मसलवालाको कब्जाबाट मुक्त बनाउनुपर्छ । किनकी समाजमा जोडिएको हुन्छ । खराब मान्छेले समाजको भलो गर्न सक्दैन । त्यसैले समाजप्रति बफादार मान्छेलाई अघि बढाउनुपर्छ ।